Home Somali News UK: Britain oo drone ku dishay muwadiniin u dhashay dalkaasi oo kamid...
Dowlada Britain ayaa xaqiijisay inay weerar Drone ku dileen labo nin oo heystay dhalashada dalkaasi kana mid ahaa dhalinyaradii ku biirtay kooxda ISIS ee ka dagaalanta Ciraaq iyo Siiriya.
Reyaad Khan iyo Ruhul Amin oo la sheegay inay wada socdeen ayaa waxaa duqeyn ku dilay ciidamada Britain oo adeegsaday diyaaradaha meesha fog laga hago ee Drone, waana markii ugu horeysay oo weerar noocaan ah UK la beegsato muwaadiniinteeda la sheegay inay ku biireen kooxda ISIS.
Xubnaha ISIS ee la dilay ayaa horey usoo saaray filimaan internetka lagu shaaciyey oo ay xubnahaasi ugu baaqayeen dhalinyarada muslimiinta ah inay kusoo biiraan kooxdaasi xagjirka ah.
Labadan nin ayaa lagu dilay dalka Siiriya dhamaadkii bishii Agoosto.
Bishii Agoosto ayey diyaaradaha Maraykanka sidan oo kale ku dileen nin kale oo heystay dhalashada Britain oo lagu magacaabi jiray Junaid Hussain oo isagu ahaa khabiirka dhanka internet u qaabilsan ISIS.
Xukuumada UK ayaan ogolaansho ka heysan Baarlamaanka dalkaasi, walow Raysalwasaare David Cameron uu shalay Baarlamaanka ka horsheegay in hawlgalkan uu ahaa mid is-difaacid ah, maadaama buu yiri ragga la dilay ay qorsheenayeen weeraro ka dhan ah dalkooda.
Deg-Deg: Mustafe Shiine Oo Kabaha La Dul-Maray Wasiir Maxamuud Xaashi Cabdi